Xiisado Siyaasadeed oo ka dhexqarxay xisbiyada Siyaasada Soomaaliland iyo…. – SBC
Xiisado Siyaasadeed oo ka dhexqarxay xisbiyada Siyaasada Soomaaliland iyo….
Posted by Webmaster on Siteenbar 5, 2012 Comments
Madaxweynihii hore Ee maamulka Soomaaliland Ahna gudoomiyaha Xisbiga mucaaradka ee Udub ayaa hadal kulul kaga jawaabay go’aamo maalin ka hor ay gaareen gudiga Diiwaangelinta iyo ansixinta xisbiyada Siyaasiyiinta ee Maamulkan Soomaaliland.
Go’aanka uu ka carooday Daahir Riyaale Kaahin madaxweynihii hore ee Maamulka Soomaaliland Ayaa ahaa markii gudiga diiwaan gelinta ururada siyaasada ee maamulkaasi ay laaleen musharixiin uu u doortay ururka uu gudoomiyaha u yahay in ay u matalaan doorashooyinka madaxtinimo ee Soomaaliland.
Daahir riyaale ayaa sheegay in arintaasi ay tahay mid bilaa sharci ah oo dacaayad weyn ku ah xisbigooda Udub “go’aankan waa mid qeyrulsharci ah oo lagu dacaayadeynayo xisbiga udub, waana masuuliyad daro” ayaa ka mid ahaa hadalada Daahir riyaale .
Waxaa kale oo uu saxaafada ka shaaciyay gudoonka sare ee Xisbiga Udub in Musharixiinta ay u soo shaxdeen xilalka madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenkaba ay yihiin Cali waran cade iyo Axmed Xaaji daahir ayana ka laaban doonin go’aankaasi “waxaana lagu shaacin doonaa shirweynaha guud ee xisbiga” waa sida uu hadalka u dhiagye.
Maalin nimadii shalay ayay aheyd markii gudiga diiwaangelinta iyo ansixinta siyaasiyiinta xisbiyada maamulkaasi uu laalay musharixiinta xisbiga Udub, iyadoona lagu wado in maalmo ka dib ay xirmaan diiwaan gelinta ururada siyaasadeed ee xisbiyada maamulkaasi .